Debut ပြီးနောက်မှာ ပထမဆုံး music show ဆုကို ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ASTRO - For her Myanmar
Debut ပြီးနောက်မှာ ပထမဆုံး music show ဆုကို ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ASTRO
၁,၀၇၂ ရက်ဟာ အဖွဲ့အတွက်ရော ပရိသတ်တွေ အတွက်ပါ အခက်ခဲဆုံး နေ့ရက်တွေ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပင်ပန်းသွားခဲ့ကြပါပြီ…
ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့ကတော့ ASTRO အတွက်ရော၊ သူ့ရဲ့ဖန်တွေဖြစ်တဲ့ AROHA တွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဆိုရင် မမှားပါဘူးနော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ASTRO ဟာ Debut ပြီး ၁,၀၇၂ ရက်ကြာအပြီးမှာ အဖွဲ့အတွက် ပထမဆုံး ဆုကို The Show ကနေ ဆွတ်ခူးရရှိလိုက်လို့ပါပဲ။
Related Article >>> ကိုယ်​အကြိုက်​ဆုံး Idol ​​တွေရဲ့ comeback နီးလာတဲ့အခါ (kpopper များအတွက်​သာ)
The Show ဆိုတာကတော့ တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက် SBS MTV ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ တီဗွီပရိုဂရမ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ Kpop အိုင်ဒေါလ်တွေက အခွေတစ်ခွေထွက်ပြီးတိုင်း ကမ်းဘတ်ပရိုမိုးရှင်း (Comeback Promotion) ရှိရင် The Show လို မြူးဇစ်ရှိုးတွေမှာ ပရိုမိုးရှင်းဆင်းပေးရပြီးတော့ ကမ်းဘတ်တိုက်နေတဲ့ တခြား အိုင်ဒေါလ်အဖွဲ့တွေနဲ့ သူနိုင်ကိုယ်နိုင် ယှဉ်ပြိုင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တွေကိုတော့ Pre-score 90% (Digital 40% ၊ Music Video 20% ၊ အကဲဖြတ်အမှတ် 15% ၊ အယ်လ်ဘမ်ရောင်းချရနှုန်း 10% နဲ့ Pre-voting 5%) နဲ့ Live voting 10% အပေါ် မူတည်ပြီး ပေးပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့၊ SBS MTV မှာ ထုတ်လွှင့်တဲ့ The Show မှာ ပထမနေရာအတွက် ASTRO ၊ ATEEZ နဲ့ Cosmic Girls တို့က ဆန်ကာတင်ရွေးချယ်ခံရပြီးတော့ စုစုပေါင်းအမှတ် ၈,၁၇၉ မှတ်နဲ့ အဲဒီအပတ်အတွက် ပထမဆုရှင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်စကားပြောတဲ့အခါမှာ အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင် JinJin က သူတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ပရိသတ်တွေ၊ အားပေးမှုတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောသွားခဲ့ပြီးတော့ Cha Eunwoo ကတော့ ဒီအချိန်ကို စောင့်နေခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ နောက်ကိုလည်း သူတို့ရဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပုံစံကိုပဲ ချပြသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင် စကားပြောနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဒီမှာလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ASTRO ရဲ့ ပထမဆုံး ပထမဆုကို ရယူပေးခဲ့တဲ့ title song All Night ကို London Noise က ရေးဖွဲ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ် All Night ဟာဆိုရင် သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံး Full-length လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
All Night music videoကိုလည်း ယောင်းတို့ ကြည့်လို့ရအောင် တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
ကြယ်လေးတွေ ပိုပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…..
References : Soompi , Koreaboo, All Kpop
၁,၀၇၂ ရကျဟာ အဖှဲ့အတှကျရော ပရိသတျတှေ အတှကျပါ အခကျခဲဆုံး နရေ့ကျတှေ ဖွဈခဲ့တာပါ။ ပငျပနျးသှားခဲ့ကွပါပွီ…
ဇနျနဝါရီ ၂၉ ရကျနကေ့တော့ ASTRO အတှကျရော၊ သူ့ရဲ့ဖနျတှဖွေဈတဲ့ AROHA တှအေတှကျ စိတျလှုပျရှားခဲ့ရတဲ့ နတေ့ဈနဆေို့ရငျ မမှားပါဘူးနျော။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ASTRO ဟာ Debut ပွီး ၁,၀၇၂ ရကျကွာအပွီးမှာ အဖှဲ့အတှကျ ပထမဆုံး ဆုကို The Show ကနေ ဆှတျခူးရရှိလိုကျလို့ပါပဲ။
Related Article >>> ကိုယျအကွိုကျဆုံး Idol တှရေဲ့ comeback နီးလာတဲ့အခါ (kpopper မြားအတှကျသာ)
The Show ဆိုတာကတော့ တောငျကိုရီးယားအခွစေိုကျ SBS MTV ရုပျသံလိုငျးရဲ့ တီဗှီပရိုဂရမျတဈခု ဖွဈပွီးတော့ အပတျစဉျ အင်ျဂါနတေို့ငျး ထုတျလှငျ့ပါတယျ။ Kpop အိုငျဒေါလျတှကေ အခှတေဈခှထှေကျပွီးတိုငျး ကမျးဘတျပရိုမိုးရှငျး (Comeback Promotion) ရှိရငျ The Show လို မွူးဇဈရှိုးတှမှော ပရိုမိုးရှငျးဆငျးပေးရပွီးတော့ ကမျးဘတျတိုကျနတေဲ့ တခွား အိုငျဒေါလျအဖှဲ့တှနေဲ့ သူနိုငျကိုယျနိုငျ ယှဉျပွိုငျရတာပဲဖွဈပါတယျ။ အမှတျတှကေိုတော့ Pre-score 90% (Digital 40% ၊ Music Video 20% ၊ အကဲဖွတျအမှတျ 15% ၊ အယျလျဘမျရောငျးခရြနှုနျး 10% နဲ့ Pre-voting 5%) နဲ့ Live voting 10% အပျေါ မူတညျပွီး ပေးပါတယျ။
ဇနျနဝါရီ ၂၉ ရကျနေ့၊ SBS MTV မှာ ထုတျလှငျ့တဲ့ The Show မှာ ပထမနရောအတှကျ ASTRO ၊ ATEEZ နဲ့ Cosmic Girls တို့က ဆနျကာတငျရှေးခယျြခံရပွီးတော့ စုစုပေါငျးအမှတျ ၈,၁၇၉ မှတျနဲ့ အဲဒီအပတျအတှကျ ပထမဆုရှငျ ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
ကြေးဇူးတငျစကားပွောတဲ့အခါမှာ အဖှဲ့ရဲ့ခေါငျးဆောငျ JinJin က သူတို့ရဲ့ ဝနျထမျးတှေ၊ ပရိသတျတှေ၊ အားပေးမှုတှအေတှကျ ကြေးဇူးတငျစကား ပွောသှားခဲ့ပွီးတော့ Cha Eunwoo ကတော့ ဒီအခြိနျကို စောငျ့နခေဲ့တဲ့ ပရိသတျတှကေို ကြေးဇူးတငျကွောငျးနဲ့ နောကျကိုလညျး သူတို့ရဲ့ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ ပုံစံကိုပဲ ခပြွသှားမယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ကြေးဇူးတငျ စကားပွောနတေဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံရိပျတှကေို ဒီမှာလညျး ကွညျ့လို့ရပါတယျ။
ASTRO ရဲ့ ပထမဆုံး ပထမဆုကို ရယူပေးခဲ့တဲ့ title song All Night ကို London Noise က ရေးဖှဲ့ပေးခဲ့ပွီးတော့ သီခငျြးအယျလျဘမျ All Night ဟာဆိုရငျ သူတို့အဖှဲ့ရဲ့ ပထမဆုံး Full-length လညျး ဖွဈပါတယျ။
ကွယျလေးတှေ ပိုပွီးအောငျမွငျပါစလေို့လညျး ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော…..
Tags: Astro, Award, Celebrity news, first, kpop, News, The Show
အိမျထောငျရေးသုခ ဆိုတာ ဘာကွောငျ့ လူတိုငျးအတှကျ အရေးကွီးတာလဲ?
အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသစ်ပြောင်းချင်တဲ့အခါ
Windy January 30, 2019